Mamaha “Ny Olan’ireo Olona Kilemaina” Tokoa Ve Ny Seza Misy Kodiarana Rôbôtika Vaovao Ao Japana ? · Global Voices teny Malagasy
Mamaha “Ny Olan'ireo Olona Kilemaina” Tokoa Ve Ny Seza Misy Kodiarana Rôbôtika Vaovao Ao Japana ?
Voadika ny 11 Febroary 2018 14:06 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Deutsch, عربي, русский, Français, Ελληνικά, English
Roboto Tmsuk RODEM. Pikantsary avy amin'ny www.tmsuk.co.jp/rodem/
Tiako ny teknolojia. Heveriko fa izaho ilay mety antsointsika ao Japana hoe ‘gijutsu otaku,’ (技術 オ タ ク), olona manana fitiavana tafahoatra amin'ny teknolojia. Angamba avy amin'ny fitomboana tao anatin'ny vanim-potoana mbola nisian'ny “mainframes” no anton'izany, ary afaka manatsara kokoa ny fikoloana ny lahatsoratra sy ny lalao miaraka amin'ny sary tena ratsy ny ordinatera manokana (PC). Kilemaina ihany koa aho, ka tena ilaiko ihany koa ny teknôlôjia. Fitaovana tena ilaina ankehitriny eo amin'ny andavan'androm-piainako ny solosaina sy ny smartphone, fa misy ihany koa fitaovana manampy izay samy miasa sy mahafinaritra, ary ny rôbôtika dia sehatra tena mahaliana ka arahako. Ny fiara tsy misy mpamily, dia azo antoka fa tsy ho avy vetivety eto amiko.
Indraindray aho dia misalasala momba ny fandrosoana ara-teknolojika manokana, satria ny tanjona ara-teknolojika dia mety hihoatra ny fanahiana momba ny fiasany. Raiso, ohatra, ny fanavaozana vao haingana avy amin'ny Tmsuk Co. Ltd, orinasa iray miorina ao Munakata City, Prefektioran'i Fukuoka, izay nanamboatra karazana seza misy kodiarana rôbôtika vaovao antsoina hoe ‘Rodem’ tamin'ny tapaky ny volana desambra 2017. Voalaza fa namboarina mba ahafahan'ny mpampiasa azy miala mora kokoa eo amin'ny seza kodiarana mankeo am-pandriana ny Rodem, tsy tahaka ny seza misy kodiarana “endrika seza” efa hatry ny ela.
Araka ny nitateran'ny ‘Nikkei Technology’ hoe:
“Ny raboto,” Rodem, “dia novolavolaina mba ahafahan'ny mpampiasa azy miakatra mora foana eo amin'ny seza misy kodiarana rehefa miala eo am-pandriana, seza lava, sns. Amin'ny fotoana hidirana sy hialàna ny raboto, dia mihodina miverina sy midina ny sezany, miakatra ny seza avy any aoriana ny mpampiasa azy. Tsy misy fiankinan-damosina, saingy afaka miondrika eo aloha mametraka ny lanjany eo amin'ny faritra alohan'ny seza ny mpampiasa azy… Azo fahanana amin'ny alalan'ny loharano herinaratra 100V ao an-tokantrano ilay roboto. Rehefa avy voafahana mandritra ny adiny valo, afaka mandeha 15 km na mihoatra izy. 6km isan'ora ny hafainganam-pandehany fara fahabeny.
Azo fehezin'ny smartphone ny fitaovana, mamela ny mpampiasa hifehy azy an-davitra, mba hampandroso ilay fitaovana na hamindra azy lavitra kokoa ny fandriana, ohatra.
Ny fahatsarana sy ny fanomezana aina miharihary no mahatonga ny ‘Rodem’ ho tena manintona, mazava ho azy. Mba hahafahana miditra sy mivoaka mora foana ny fandriana tsy mila mpikarakara, miaraka amin'ity seza misy kodiarana mahafinaritra ity, izay tena zavatra tsara izany, sa tsy izany? “Raha ahafaha-mifamihina ny seza misy kodiarana mahazatra,” manome “piggyback” (afa-mibaby) kosa ny Rodem hoy ny filoha Tmsuk, Yoichi Takamoto, milaza fa mihevitra izany tokoa izy.
Nilaza ihany koa ny mpitondratenin'ny orinasa Tmsuk tamin'ny lahatsoratra iray tao amin'ny The Daily Mail fa ny Rodem dia natao mba “… handrava ireo sakana atrehin'ny olona antitra sy kilemaina,” mba hahafahana manana “fihetsika hanitarana ny toerana onenan'ny mpampiasa azy sy hampitombo ny kalitaon'ny fiainan'izy ireo.”
Ny faniriana handrava ny sakana sy hampitombo ny kalitaon'ny fiainan'ny olona sembana dia mazava ho azy fa zavatra tsara. Eny fa na dia mbola misalasala momba ny Rodem aza ny sasany ao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny sembana.
Nisioka ilay mpampiasa seza misy kodiarana sady manam-pahaizana momba ny Access and Inclusion monina ao amin'ny Fanjakana Mitambatra, Mik Scarlet fa leo ny. . .”ny fitiavan-tenan'ireo mpanamboatra ny fitaovana izay milaza aminay izay ilainay & mamorona vahaolana amin'ny olana tsy hananan'ny olona kilemaina akory izy. Tsy hampandroso ny teknolojia ahafahana miditra izany fa manintona fotsiny amin'ny fampahalalam-baovao. “
Nivantam-piteny ihany koa i Scarlet tamin'ny resaka nifanaovany tamiko tamin'ny alàlan'ny hafatra manokana tao amin'ny Twitter. “Ny seza Tmsuk Rodem dia manaporofo fa tsy mahalala tsara momba ny seza misy kodiarana & ny mpampiasa azy ireo mpamorona ny roboto”, hoy izy. “… ny hevitra hafahafa manodidina ny fialàna ao anatiny dia midika fa vitsy dia vitsy ireo mpampiasa ny seza nandray anjara tamin'ny dingana famolavolana ny seza. Sarotra kokoa ny miala ao anatin'ny Tmsuk Rodem raha oharina amin'ny fialàna amin'ny seza misy kodiarana mahazatra ary tsy dia misy loatra ny fanohanana noho ny tsy fisian'ny fiankinana. Tsy mety ho an'ireo mpampiasa seza misy kodiarana izy io.
Raha ny hanampy ny ankamaroan'ny mpampiasa seza misy kodiarana no tanjony, hoy i Mik Scarlet, tsy avo lenta tsotra izao ny seza misy kodiarana Tmsuk Rodem. Saingy ho an'ny fampahalalam-baovao sy ny vahoaka amin'ny ankapobeny, dia tahaka ny hevitra tsara izany. Araka ny lahatsoratra iray tao amin'ny tranonkala Engadget izay nipoaka tamin'ny desambra 2017, “Ny seza misy kodiarana rôbôtika dia tsy vitany hoe manome anao “piggyback” hiakarana ihany, fa koa mametraka anao amin'ny toerana aloha sy ambony kokoa. Mora kokoa ny miborosy ny nifinao, manamboara sakafo maraina, na miresaka mivantana.”
Nanan-kevitra hijery ny antony mahatonga an'i Japana liana amin'ny rôbôtika ihany koa aho, izay mety ahitana ny tsy fahampian'ny mpiasa ho an'ny asa sasantsasany. Ny hopitaly sy ny trano fampiantranoana no anisan'ireo sehatra tsy mahazo famatsiam-bola sy tsy ampy mpiasa ao Japana, ary eo amin'ny sehatra tahaka ny tolotra ho an'ny mpanjifa, toa miha mahazo vahana ara-bakiteny ny rôbôtika. Ankehitriny, fanampiana ho an'ny fihetseham-batana izany. Tsara daholo izany, saingy ny fahazoana aina, amin'ity tranga ity, dia toa mifamatotra amin'ny tsy fifampiraharahana amin'ny olombelona. Mety ho mahafinaritra ho an'ny olona miezaka mividy zavatra any amin'ny fivarotana izany, saingy tsy mahafinaritra kosa, hoy ny hafa mieriteritra, ho an'ny mpivarotra izay nosoloin'ny raboto ny asany.
Ny fidirana ao am-pandriana sy ny fialàna ao am-pandriana no anisan'ny asa sarotra indrindra atrehin'ny olona kilemaina, ary azoko antoka fa indray andro any, hisy ny fitaovana rôbôtika hovolavolaina izay hanome fahafaham-po amin'ny ahiahin'i Mik Scarlet sy ny hafa momba ny vatany ary hanafoana tanteraka ny filàn'ireo mpampiasa seza misy kodiarana hiankina amin'ny mpikarakara. Amin'ny fisiany amin'izao fotoana izao anefa, tsy mamaly izany ny Tmsuk Rodem.
Toa mikendry ireo olona antitra mety tsy afaka manana mpikarakara ihany koa ny Rodem, indrindra raha mipetraka any amin'ny faritra ambanivohitr'i Japana izy ireo, izay ilaina manokana ny mpikarakara marobe. Ny fanontaniako dia izao: Raha tokony hampivelatra teknolojia vaovao izay hita fa tsy mifanaraka, nahoana no tsy mampiofana mpikarakara matihanina farafaharatsiny?
Afganistana 2 herinandro izay